UKELLY CLARKSON UTHINTELWE NGEXESHA LOPHICOTHO OLUYIMFAMA - HOLLYWOOD
Ixesha le-19 Ilizwi ulapha apha! Ukusasaza ngoMvulo, nge-19 ka-Okthobha, inkulumbuso yexesha yabonwa UBlake Shelton , UKelly Clarkson kwaye UJohn Legend ukubuya njengabaqeqeshi kunye UGwen Stefani ukuba lilungu kuba umqeqeshi wesine njengoko eguqukile UNick Jonas . Imvumi yokuqala yokuqhuba ngorhatya lokuqala loVavanyo lweeMfama yayinguTamara Jade.
Umntu oneminyaka engama-30 ubudala waseBowie, eMaryland wakhetha ukucula uCuz Ndiyakuthanda ngo ULizzo . UKelly noJohn abalindanga ixesha elide ukubonisa izitulo zabo uTamara. OoBlackbirds uBlake noGwen kamva bongeze amaqhosha abo, oko kuthetha ukuba uTamara ufumene isitulo esinezihlalo ezine. Ekugqibeleni waya kwiQela likaJohn.
Imvumi elandelayo yayinguLauren Frihauf. Ngobo busuku, umntwana oneminyaka eli-16 ubudala wayecula Yiza kwiWindows Window yam UMelissa Etheridge uJohn noGwen babethanda, nangona uKelly noBlake bengakhange babethe izitulo zabo kuLauren. Njengokuba uKelly noBlake babecinga ukuba uGwen angangumqeqeshi ogqibeleleyo kaLauren, ekugqibeleni wagqiba ekubeni abe kwiqela leGwen.
Ukucula imodeli yeR & B yoLuthando ngu UBob marley yayinguJoseph Soul. UKelly noBlake bajika izitulo kuye. UBlake uzame ukweyisela uJoseph ukuba abe semsebenzini ngokuziqhayisa ngeentshatsheli zakhe ezisixhenxe, kunye neqela lesibini eliphumeleleyo, imvumi yeR & B / pop UJermaine Paul . Ngelishwa, khange isebenze ngenxa kaJoseph ekhethiweyo ukuba abe kwiqela leKelly.
U-Ian Flanigan emva koko wayamkela ngokufanelekileyo imeko yeColder Weather ngu Ibhendi yeZac Brown . Ilizwi lakhe elirhabaxa lalanele ukwenza ukuba uBlake abethe iqhosha lakhe. Njengoko uBlake wayengumqeqeshi omnye ukubonisa isihlalo sakhe ku-Ian, wayehlala esiya kwiQela uBlake. Omnye okhuphisana naye omncinci kwesi siqendu sangokuhlwa yayinguHailey Green. Inzalelwane yase-Martin eneminyaka eli-14 ubudala inethemba lokuchukumisa umqeqeshi ngokucula iSoulshine ngo Iqela leAllman Brothers , nangona kungekho mntu ulusizi wamjika.
Hlu flash ixesha lesi-2 isiqendu 1
Olandelayo nguJim Ranger waseCalifornia owakhetha ukucula UKeith Urban 'Luhlaza okwesibhakabhaka ayingombala wakho. UJohn, uBlake noGwen bajikela izitulo kuye. Ngaphandle kweepaki zikaJohn noBlake, uJim wazimisela ukuya kwiQela uBlake.
U-Eli Zamora oneminyaka engama-25 emva koko wabetha eqongeni ukucula uYo Lo Se Que Tu Te Vas ngo UJuan Gabriel . UKelly nguye ojika isihlalo sakhe ku-Eli, oko kuthetha ukuba wayehlala kwiqela leKelly. Emva kwexesha, i-paige Turner yachukumisa uGwen noBlake nganye kunye nokusebenza kwayo okungenakwenzeka Iveki 'Biza Igama Lam. Ekugqibeleni, uGwen wafumana njengoko uPaige wayesemsebenzini.
UCorey Ward, okwangoku, wacula iNdlela esiya kuyo UKaleo kodwa akukho mntu wamjikelayo. Imvumi elandelayo yayinguMarisa Corvo owayedlala ngokugqibeleleyo Ipinki wonke umntu wajika izitulo ecaleni kukaJohn. Kwincam, uCorey wajoyina iqela uKelly.
Ngokumalunga nomlingisi wokugqibela ngorhatya, uJohn Holiday wazingqina ukuba uyimvumi eyoyikekayo ngokukhupha iMisty ngo U-Ella Fitzgerald . Wonke umntu wayecinga ukuba yinkosikazi ecinga ngokungakholeleki kwakhe. UJohn noGwen babetha amaqhosha abo ngelixa uKelly wayevaliwe. Ekugqibeleni, uJohns wabumbana njengoJohn Holiday waya kwiQela likaJohn.
Izigaba: Iwiki Amazon-Prime Hulu
liphela nini ixesha lama-22 diablo 3
I-axl inyuke ngexabiso elifanelekileyo ngo-2017
jesse drent net efanelekileyo
UBrittney lee saunders u-twitter
unethamsanqa ngentombazana eluhlaza okwesibhakabhaka
Ngaba ii-irs ziya kuvulwa ngemini yomongameli